“Shir Aan Joogay Oo Aan Ogahay, Oo Uu Madaxweynuhu Yidhi Arrintaa (Musharraxnimada) Waan Ka Tanaasulay Haba-Yaraate Ma Jiro” Muuse Biixi Cabdi | Somaliland Today
← Let teenagers lie-in, urge top scientists
Masuuliyiinta Xisbiga UCID Oo Si Ballaadhan Loogu Soo Dhaweeyay Magaaladda Burco.+Sawiro →
“Shir Aan Joogay Oo Aan Ogahay, Oo Uu Madaxweynuhu Yidhi Arrintaa (Musharraxnimada) Waan Ka Tanaasulay Haba-Yaraate Ma Jiro” Muuse Biixi Cabdi
(SLT-Hargaysa) – Guddoomiyaha Xisbiga talada Somaliland haya ee KULMIYE, Muj. Muuse Biixi Cabdi, ayaa beeniyay warar saxaafadda qaarkood qoreen maal mihii la soo dhaafay, kuwaas oo lagu sheegay in shir Guddoomiye Muuse Biixi goob joog ka ahaa uu Madaxweynuhu kaga tanaasulay Musharaxnimada doorashada soo socota. Guddoomiyaha KULMIYE ayaa warkaas ku tilmaamay mid aan sal iyo raadtoona lahayn. Sidaana wuxuu ka sheegay shirjaraa’id oo uu goor dhaweyd ku qabtay Magaaladda Hargaysa. Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalkiisa ku bilaabay.
“Horta doorashada wakhtigeeda iyo goorta la qabanaayo cidbuu sharcigu siiyay, cidaas uunba ka hadli karta waana Koomiishanka doorashooyinka, iyagaa sharcigu siisay inay cayimaan maalinta doorashada la qabanaayo. Annagu faro galin mayno, lakiin Xisbiga KULMIYE iyo Xukuumadiisu waxaanu cadaynaynaa wixii hawlo ahaa ee ku xidhnaa in aanu dhammaynay. Haday sharcigii tahay waanu dhamaynay, Koomiishankii waa la magacaabay, dhaqaalihii waa la sameeyay markaa xagga doorashada annaga wax nagaga laabani majiro.” Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE oo ka hadlaaya wararkii laga baahiyay Madaxweynaha inuu doorashada ka hadhaayo, wuxuu yidhi.
“Shir aan joogay oo aan ogahay, oo Madaxweynuhu yidhi arrintaas waan ka tanaasulay, ama go’aankaas uu ka sheegay habayaraate ma jiro, warkaasi mid jira maha, meel aan joogay oo arrintaas lagu soo qaadayna ma jirto, sideedana arrintaasi mij jirta maha.” Guddoomiye Muuse Biixi wuxuu sidoo kale shirkiisa jaraa’id kaga hadlay xubnaha Koomiishanka Qaranka Somaliland loo xulay, maruu ka hadlaayayna wuxuu yidhi. “Koomiishanka saddex Madaxweynaha ayaa keenay, labana Guurtida, labana Xisbiyada Mucaaridka, waa siday ahaan jirtay. Dad Mudakar ah oo ragg iyo dumar leh oo badan kooda aan wado garanaayo weeye, wanan ku kalsoonahay.”
Halkan Ka Daawo Hadalkii Guddoomiyaha KULMIYE.